Ny fifantohana sy ny fanabeazana dia mifantoka amin'ny fitsidihana avo lenta an'ny UNWTO any Tonizia
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fifantohana sy ny fanabeazana dia mifantoka amin'ny fitsidihana avo lenta an'ny UNWTO any Tonizia
Ny sekretera jeneralin'ny Fikambananan'ny fizahantany manerantany (UNWTO) nihaona tamin'i HE Kais Saied, filohan'i Tonizia, sy ny praiminisiny Hichem Mechichi avy any Tonizia nandritra ny fitsidihana ambaratonga ambony tany amin'ny firenena Afrikana Avaratra. Ity fitsidihana faharoa an'ny fanjakana mpikambana afrikanina ity tao anatin'ny telo herinandro dia manamafy ny fanoloran-tenan'ny UNWTO hamerina ny fizahan-tany manerana ny kaontinanta ary hifantoka amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo governemanta mba hampiroborobo ny fitomboana sy ny fanavaozana maharitra.
Ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili dia nisaotra ny filoham-pirenena Saied sy ny governemanta noho ny fanohanan'izy ireo mafy ny fizahan-tany amin'izao fotoan-tsarotra izao. Ny fifantohana lehibe tamin'ny fihaonana avo lenta dia ny fikarohana ireo fomba ahafahan'ny UNWTO manohana an'i Tonizia satria mampita ny fahefan'ny fizahan-tany hitarika fampandrosoana maharitra. Ankoatr'izay, ny sekretera jeneraly sy ny manampahefana Toniziana dia niresaka ny fiaraha-miasa amin'ny UNWTO miaraka amin'ny Banky Eoropeanina momba ny fanarenana sy ny fampandrosoana (EBRD), miaraka amina tetikasa ankehitriny izay manome fanohanana ara-teknika handroahana ny famerenana ny sehatry ny fizahan-tany any Tonizia aorian'ny areti-mandringana.
Miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy
Ny sekretera jeneraly Pololikashvili dia nilaza fa: "Tonizia dia ohatra iray amin'ny firenena mampiasa vola amin'ny fizahan-tany amin'ny fizahan-tany mahomby amin'ny fampiasa amin'ny fizahan-tany ary mangeja ny fahefana tsy manam-paharoa amin'ity sehatra ity hampiroborobo ny fampandrosoana ary hamorona fotoana mety ho an'ny maro. Misaotra ny filoham-pirenena Saied aho noho ny fandraisam-bahiny nampiantranoiny sy ny fanohanan'ny governemanta ny fizahan-tany mandritra ny androm-pahafaty.
Ankoatry ny fihaonana tamin'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra dia nanao dinika nifanaovana tamin'ny minisitry ny fizahantany toniziana Habib Ammar ihany koa ny delegasiona UNWTO mba hiadian-kevitra momba ny drafitra ho an'ny fiaraha-miasa ankehitriny sy ho avy. Hita taratra amin'ny laharam-pahamehan'ny mpitarika UNWTO ny lahateny, nifantoka tamin'ny fomba hampiroboroboana ny fizahan-tany maharitra sy hamoronana asa amin'ny alàlan'ny fanavaozana, fanabeazana ary fampiasam-bola, ary koa fizahan-tany ho fampandrosoana any ambanivohitra.
Fampiasam-bola amin'ny ho avy any Afrika
Hita taratra ihany koa ny laharam-pahamehan'ny UNWTO, indrindra ny fahavononany hampivelatra talenta sy hampiroborobo ny fanabeazana, ny Sekretera Jeneraly dia niresaka tamin'ny fisokafan'ny Simposium fandraisam-bahiny Tonizia. Ny Symposium dia natao tao amin'ny Carthage High Commercial Studies Institute (na IHEC Carthage), sekoly ambaratonga voalohany sy malaza indrindra eto Tonizia.
Ny sehatry ny serivisy, izay ahitàna ny fizahan-tany, dia iray amin'ireo sehatra roa toekarena lehibe ho an'i Tonizia. Raha ny angom-baovao UNWTO, ny toeran'ireo toerana afrikanina dia niaina fihenan'ny 99% ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena nandritra ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2020 raha oharina amin'ny taona 2019. Miara-miasa akaiky amin'ireo mpikambana mpikambana manerana ny kaontinanta ny UNWTO dia nanangana ny Agenda 2030 ho an'i Afrika hanehoana ny fiantraikan'ny ny Covid-19 areti-mifindra ary manampy amin'ny fitarihana fanarenana maharitra.
COVID-19 any Korea Avaratra: fanenjehana, fanidiana ny renivohitra, fandrarana ny jono